नेपाली सेनाको टोलीले थारूको घर-घरमा आगो लगाईदै यसरी थारू जतिको बास नै उठायो
मिडियाको गलत प्रचार र चार दलले गर्दा आज थारु जातिलाई नै घृणाको नजरले देखियो तर थारु जातिलाई दास सरह सधै नै खुट्टको तल राख्न खोज्ने उनिहरुलाई किन कोही केही भन्दैन?? निर्दोस थारूको घर घरमा सेनाकै आडमा आगो लगाइदा पनि किन कोही बोल्दैन?? एउटा बालक पनि गोली लागेर मर्यो के हामीलाई दुख लागेको छैन?? तर गलत प्रचार गरेर थारुको नाम बिगार्नेलाई थाहा हुनुपर्ने बालक गोली लागेर मरेको छ र बन्दुक प्रहरीको हातमा हुन्छ।
आनूदोलनकारीले बन्दुक चलाको त पुस्टि नै भाको छैन। यो एक दुर्घटनालाई थारुको नाम दिनेहरु सोच्नुस एकपल्ट कृपया।। अनि मान्छे जलाको गलत फोटो फेसबुकमा राख्नेहरु यो लिङ्कमा हेर्नुस गलत आरोप लाग्दा हामी असहय बनिरहेका छौं। ....... भर्खरै, टीकापुर अस्पतालमा कार्यरत एक जना चिकित्सकले दिएको जानकारी अनुसार उक्त अस्पतालको अवस्था भयवाह बनेको छ । अस्पतालको सेवा सुविधाको वितरण अनुहार हेरेर गरिएको अवस्था छ । थारू कर्मचारीहरुलाई घर फिर्ता पठाइएृको अवस्था छ । कफर््युको क्रममा तथा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरिएको अवस्थामा पनि छानी–छानी तोडफोड र आगजनि भैरहेको छ । यति बेला मानवअधिकारवादीहरु भूमिकाविहिन अवस्थामा द्ेखिएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरु प्नि केवल सूचना प्रवाह गर्ने होडबाजीमा पीडितलाई झनै पीडामा पार्ने काम, बलेको आगोमा घ्यु थप्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । .......
कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड पक्षधरले थारुहट नेता कार्यकर्ताको घरघरमा आगो लगाइहेका छन् । सभासद् रामजनम चौधरीले दिएको जानकारी अनुसार कफ्र्यूको उलंघन गर्दै अखण्डका पक्षधरका कार्यकर्ताले क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सभासद् जनकराज चौधरीको घरमा आगो लगाएका छन् । थारुहट आन्दोलनका क्षेत्रिय संयोजक रेशम चौधरीको घरमा पनि प्रदर्शनकारीले आगो लगाइदिएका छन् । सभासद् रामजनम चौधरीले प्रहरी र सेनाको आडमा थारु कार्यकर्ताको घरमा आगो लगाइएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार अहिले सम्म १० घरमा आगो लागि सकेको छ ।
त्यस्तै प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन भन्दै चार राउण्ड हवाइ फायर गरेको जनाएको छ । ........... टीकापुर घटना निक्कै दुःखद् र त्रासदीपूर्ण छ । यो घटना कि त ठूलो षडयन्त्र हुनुपर्छ, कि त
सयौँको संख्यामा हताहती भएका आन्दोलनकारीको संख्या लुकाइएको हुनुपर्छ ।
........ मात्र तीन आन्दोलनकारीको हत्या हुँदा १७ जना प्रहरीको हत्या र ५६ जना प्रहरी घाइते हुनै सक्दैन । कि त यो योजनाबद्ध तथा सुनियोजित षडयन्त्र रचेर गराइएको घटना हो । कि त घटनाले थप उग्र रुप लिने भएर
सरकारले आन्दोलनकारीतर्फ भएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
......... लौ मानौँ प्रहरीले फायर खोल्नुभन्दा अघि नै आन्दोलनकारीले उनीहरुलाई कब्जामा लिएर मारे रे ! तर के ८० जना हतियारबद्ध प्रहरी एकै ठाउँ हुनु भनेको कम शक्ति हो ? त्यत्रो प्रहरीले आफ्नो प्रमुख कमाण्डर एसएसपीलाई मार्दासम्म तीन जना मात्र मर्नेगरी गोली चलाए होलान् त ? ...... लौ प्रहरीले गोली नै चलाउन पाएनन् रे, त्यत्रा तालिमप्राप्त प्रहरीले कम्तीमा ३/४ जनालाई त त्यसै पनि ढाल्छन् । अर्को कुरा, हतियार साथमा भएको प्रहरीले गोली चलाउन थालेपछि आन्दोलनकारी त्यसै पनि भाग्छन् । ..... गृहमन्त्रीले २ सयको संख्यामा भाला, बञ्चरो र खुकुरी लिएर आएका आन्दोलनकारी भनेका छन् । के त्यति सानो संख्याको प्रदर्शनकारीले त्यति ठूलो संख्यामा प्रहरीको हत्या गर्न सम्भव छ ? यो पत्याउन सकिने कुरा होइन । ....... त्यत्रो घम्साघम्सी हुँदा आन्दोलनकारी पनि पक्कै घाइते भएका होलान् ती कहाँ गए ? अझ सर्वसाधारण आन्दोलनकारी त धेरै पर्नुपर्ने । किनकि उनीहरुलाई यस्तो बेला सुरक्षित हुने तरिका नै थाहा हुँदैन । ...... जिल्ला अस्पतालमा त घाइते प्रहरी मात्र छन् भनिएको छ । के कुनै आन्दोलनकारी घाइते नभई त्यति ठूलो संख्याको प्रहरी हत्या सम्भव छ ? छैन । ....... त्यहाँ सयौँको संख्यामा आन्दोलनकारी हताहत भएको हुनैपर्छ । सरकार र आन्दोलनकारी दुबैबाट तत्कालै यथार्थ बाहिर आउनुपर्छ, भोलि फेरि यस्तै गरी अर्को ठाउँमा आगो लागिसकेपछि हैन । ..... प्रजिअले अहिलेसम्म ६ जनाको मात्र हत्या भएको पुष्टि गरेका छन् । तर मिडियाले १७ जनाको हत्या भन्दै प्रचार गरेका छन् । यसले तनाव झन् बढाउने छ । ...... आफ्नो पहिचान खोज्दै सडकमा आएका थारुहरुको मागलाई बुद्धिहीन नेताहरुले कुनै न कुनै ढंगले चाँडै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । थारुहरुको मात्र होइन उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्नेतिर पनि दलका टाउकेहरुको ध्यान जान उत्तिकै जरुरी छ । होइन भने यस्तो घटना कैलालीमा मात्र होइन देशका विभिन्न स्थानमा कुनै न कुनै दिन हुने अवश्यम्भावी छ । थरुहट माग्ने थाहहरुविरुद्ध सेना परिचालन गर्नुअघि टीकापुर घटनाको यथार्थ संसद र जनतालाई दिनपर्दैन गृहमन्त्रीज्यू र रक्षामन्त्रीको पद सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीज्यू ?
सरकारको कारण हिंसा भड्कीयो, सेनाले दमन गरे गृहयुद्ध : लेखी
थारु आन्दोलनका अगुवा राजकुमार लेखीले राज्यको हेपाहा प्रवृत्तिको कारण कैलालीको टिकापुरमा हिंसा भड्कीएको आरोप लगाएका छन् । थारु आन्दोलनलाई तुहाउन नियोजित रुपमा कैलालीको टिकापुर सरकारी पक्षले नै हिंसा भड्काएको उनको आरोप छ । ..... थारु आन्दोलन संयोजनकर्ता मध्येका एक लेखीले नयाँ पेजसँग सोमबार राती कुरा गर्दैं थारु आन्दोलनलाई बदनाम बनाउन थारु बिरोधीहरुले भिजलन्ते प्रयोग गरेको हुन सक्ने आशंका व्याक्त गरे । सरकारले थारु समुदायलाई हेपेर वेवास्ता गरेको आरोप छ उनको । भने,
‘आमहड्ताल सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेर थारु समुदाय १३ दिनदेखी आन्दोलनमा थियो । सरकारले दुुई चार झुन्ड सहभागी अखण्ड आन्दोलनको माग २ दिनमै सम्बोधन गर्यो । तर, लाखौं सहभागी थारु आन्दोलनको वेवास्ता गरीरह्यो ।’
...... ‘१३ दिनदेखी थारु समुदाय आन्दोलनमा थियो । यतिका दिनसम्म राज्यले नसुनेजस्तै गर्यो । अहिले फेरी समुदायलाई आतंककारी भन्दैछ । थारुमाथिको यो हेपाइ हो ।’ .....
सोमबारको घटनामा सैयौं थारु आन्दोलनकारी मारिएको हुनसक्ने उनले आशंका व्याक्त गरे । ‘अझैँसम्म गोली चलीरहेको छ, थारु बस्तीमाथि पसेर प्रहरीले आंतक मच्चाइरहेको छ’ उनले भने,‘थारु आन्दोलनकारी मारिएको सुचना सरकारले लुकाइरहेको छ ।’
.... शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सेना परिचालन गरेर दमन गरिए
उनको चेतावनी छ । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काउन नेताहरुले भुमिका निर्वाह गरीरहेको दाबी गरे ।
कैलालीमा कति प्रदर्शनकारी मारिए?
थारु सभासदहरुले कैलालीको टीकापुरमा भएको झडपमा सय भन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्ता मारिएको दावी गरेका छन् । .... प्रहरीले आधा घण्टासम्म निरन्तर गोली चलाएर आफ्ना एक सय भन्दा बढी कार्यकर्ता मारेको दावी गरेका हुन् । .... मारिएका आफूहरुका कार्यकर्ताका शव प्रहरीले नै गायव पारेको
..... सभासदहरुले घटनास्थलमा प्रहरीले अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरका कार्यकर्तालाई मात्र जान दिएकाले घटना रहस्यमय भएको दावी गरेका छन् । ..... सभासदहरुले घटनास्थलमा मानवअधिकारवादी र सञ्चार माध्यमलाई जान दिएर घटनाको वास्तविकता ल्याउने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री कोइरालासँग आग्रह पनि गरेका थिए । .... थारु नेताहरुले अखण्ड पक्षधरले एकलौटी प्रचार गरेको भन्दै घटनाको वास्तविकता ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
गौरमा प्रहरीको गोली लागि एकको मृत्यु, प्रहरीद्वारा मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन
रौतहट जिल्ला सदरमुकाम गौरमा मंगलबार दिउँसो प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक १८ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको छ । मठिया-६ का १८ वर्षीय राजकिशोर ठाकुरलाई पिठ्युँमा गोली लागेको र उनको मृगौला छेड्दै पेटबाट निस्केको जिल्ला अस्पताल गौरका चिकित्सकहरुले बताएका छन् । ....... गौरस्थित गुप्ता पेट्रोल पम्प अगाडि मंगलबार दिउँसो प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच दोहोरो झडप भइरहँदा प्रहरीले एक्कासी गोली चलाएको थियो । बाटोको छेउबाट हिँड्दै गरेका ठाकुर गोली चलेपछि भाग्न खोज्दा पछाडिबाट पिठ्युँमा गोली लागेको हो । ....... स्थानीय पत्रकार प्रविण तिवडेवालका अनुसार
गोली लागि लडेका युवक ठाकुरलाई प्रहरीले अस्पताल पुर्याउनु साटो घेरेर पिटेका थिए । करिब २० जनाको संख्यामा रहेका प्रहरीले गोली लागेर भुईँमा लडेका उनलाई बुटै बुटले हिर्काएका थिए ।
....... मृतक ठाकुर प्रदर्शनकारी नरहेको बताइएको छ ।
एफएम र थारु नेताहरुको घर जले, कहाँ छन् नेपाली सेना ?
मंगलबार कर्फयु जारी भएको समयमै कैलालीमा सभासद् जनक चौधरी तथा थारु आन्दोलनका अगुवा नेता रेशम चौधरीको घरमा आगजनी भएको छ । कैललीको धनसिंहपुर र बनगाउँसहित केही गाउँहरुको थारु बस्तीमा आगजनी गरिएको छ । ...... कर्फयुको अवग्या गर्दै निस्केको एक समूहले थारुहरुको घरमा आगजनी गर्नुका साथै विभिन्न गाउँहरुमा पनि थारुहरुको बस्ती जलाउनका साथै कुटपिट गरिएका छन् । ...... नेता रेशम चौधरीले सञ्चालन गरेको फुलवारी एफएम तथा फुलबारी रिसोर्टलगायत उनको सञ्चालनमा रहेको केही पसलहरुमा समेत आगजनी गरिएको छ । ..... पत्रकार चौधरीका अनुसार कैलालीमा नेपाली सेना परिचालन भएपनि यस्तो घटना बढ्दै जानुले थारुहरु झनै त्रसित बनेका छन् । प्रहरीहरु उलेख्यरुपमा परिचालन भएपनि उग्ररुपमा थारुहरुको घरमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । .....
नेपाली सेना परिचालन भईसकेको स्थानमा यस्तो घटना बढ्दै जानु
..... आज जिल्ला प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी आइतबारको घटना बारे जानाकरी गराएको बताए । उनले प्रहरी मारिएको जानकारी मात्र दिइए तर प्रदर्शनकारी मारिएको जानकारी अहिलेसम्म प्रहरीले पुष्टि नगरेको बताए ।
टिकापुरमा ३५ जनाभन्दा बढी मारिएको दाबी, संख्या बढ्दै
टिकापुर प्रहरीले अनौपचारीकरुपमा दिएको जनकारीअनुसार हालसम्म ३५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको हुन सक्छ । तर स्थानीय पत्रकारहरुका अनुसार प्रहरी र प्रर्दशनकारीसहित
करिब ४० जना मारिएको हुन सक्छन् ।
.... हालसम्म १२ जनाको नाम मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । टिकापुर अस्पताल पुगेका लासहरुको मात्र विस्तृत जानकारी आएको छ । ...... स्थानीय प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट लासहरु संकलन गरिहरेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ..... हवलदार रामविहारी चौधरी र ललित साउदको मृत्यु भएको
सिरहामा पनि गोली चल्यो, फोरम नेपालका नेता साह घाइते
प्रहरीले विहान स्काटिगं गरेर सवारी साधान पास गराउँदा प्रर्दशनकारीहरु सडकबाट उठन मानेका थिएनन् । .... मधेशी मोर्चाले थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
सेना परिचालन गरेर मधेशी र थारुविरुद्ध सरकारले युद्ध घोषणा गर्‍यो : मानवअधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीवी
लिम्बुवान समर्थित मानवअधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरुले मधेशी र थारु (आदिवासी जनजाति)विरुद्ध सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् । .... सेना परिचालनलाई मानवअधिकार उल्लंघन बताउँदै उनीहरुले नेपाली जनताविरुद्ध सेना प्रयोग गर्ने अधिकार सत्तासीन दलका शासकहरुलाई नभएको बताएका छन् । ...... विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तासीनहरुले जनताविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको भन्दै घोर आपत्ति जनाएका छन् । ...... विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेना राज्यको सुरक्षाको लागि हो, नेपाली जनताको विरुद्धमा परिचालन र जातीय नरसंहार गर्नको लागि होइन ।’ ...... दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर जनतालाई दमन गरेर र नेपाली सेना परिचालन गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै राजनीतिक रुपमा वार्ताबाट समाधान गर्नपर्ने बताइएको छ । ...... भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । त्यस्तै दाङ, जलेश्वर, जनकपुरलगायतमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । ...... लिम्बुवान समर्थित मानवअधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरुले सेना परिचालन तुरुन्त रोक्न, घाइतेहरुको उपचार गर्न र उत्पीडिहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । ....... वक्तव्य जारी गर्नेहरुमा
मञ्जुल याक्थुङ्बा, डा. कृष्ण भट्टचन, डा. युवराज लिम्बु, नवीन सुब्बा, खगेद्र जबेगु, अर्जुन लिम्बु, राम मादेन, नारायण निङलेखु, नन्द कन्दङ्वा, शंकर लिम्बु, नेत्र तुम्बाहाम्फे र अमर तुम्याहाङ
रहेका छन् ।
नेपालगन्जमा फेरि २ बजेबाट कफर्यु
कफ्र्यु लगत्तै नेपालगन्ज सुनसान देखिएको छ । ........ ग्रामीण क्षेत्र भने मंगलवार तनावग्रस्त रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बाँकेका ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक प्रदर्शन भैरहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
कर्फ्युकै बीचमा टीकापुरमा सद्भावना पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायत कैयौको घरमा आगजनी, बदला लिन प्रहरीको पनि साथ हुन सक्ने आशंका
भड्किएको हिंसात्मक दंगा पछि आक्रोशित समुहले टीकापुरका सद्भावना पार्टीका नेता संचार उद्यमी एवं कलाकार रेशम चौधरीको फुलबारी एफएम, फुलबारी रिसोर्ट, आगजनी गरेका छन् | कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का सभासद जनक चौधरीको घरमा पनि आगजनी गरिएको खबर छ | हिंसा भड्किए देखि रातीबाट नै टिकापुरमा कैयौ थारुहरुको पसल, घरमा आगजनी गरिएको छ | ....
कर्फ्यु जारी भएकै बेला भएका बदलाका यस्ता घटना घट्नुमा प्रहरीको सहयोग बिना सम्भव नहुने भन्दै स्थानीय प्रशासनको भूमिकामा शंका गरिएको छ |
federalism madhesi madhesi kranti 2015 madhesi kranti3Nepal tharu Tharuhat tharuwan